Fananana, anatiny | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Topic: Furniture, Interior
Mba toroy hevitra aho .... Te hividy sofa zoro aho. Inona no rafitra azo itokisana kokoa: feso feso na boky euro?
Mba toroy hevitra aho .... Te hividy sofa zoro aho. Inona no rafitra azo itokisana kokoa: feso feso na boky euro? Manoro hevitra ny feso aho, tiako be izany Ny zava-dehibe indrindra dia ny misy mpanamboatra tsara, ary ny fanaka dia maivana, vita amin'ny fitaovana tsara. Raha matory ianao ...
Inona no lakozia mifidy: glossy na matte ????
Lakozia iza no hisafidianana: glossy sa matte ???? Tsy tiako ny glossy-on nm dian-tanana hatrany. Fa izao no hevitro. Matte, amin'ny gloss ny toerana rehetra dia ho hita. Ny kisoa dia vita amin'ny ankizy. U ...
Inona no loza, ary mampidi-doza ny fanaka vita amin'ny solaitrabe sy ny solaitrabe?
Inona no simba, ary mampidi-doza ahoana ny fanaka vita amin'ny chipboard sy chipboard? Nihazakazaka nankany amin'ny solaitrabe ambany kalitao izahay, nividy fanaka ho an'ny ankizy. Fofona be izany ka tsy nahita tory ireo ankizy. Nifindra herinandro izahay ...
Tafio eny amin'ny kamiao! Mila trano fisakafoanana aho, avy amin'ny mpifanolo-bodirindrina. Nisy nahita ve ireo?
Hidin-trano vata fampangatsiahana! Mila hidin-trano amin'ny vata fampangatsiahana avy amin'ireo mpifanila vodirindrina amiko aho. Nisy nahita izany ve? Indray mandeha tao amin'ny magazay dia nahita vata fampangatsiahana maoderina misy hidin-trano, gaga ihany koa aho. Ka izahao ary zahao. ary ...
Inona ny metatra?
Inona no atao hoe metatra mihazakazaka? Square 1 m ny sakany 1m 1х1m lava dia 1 metatra lava ny halavan'ny metatra 1 metatra ny halavany 1 metatra amin'ny lamba ...
Ahoana no hanavahana ny lanjan'ny gonim-bidy amin'ny loko? Ary inona no lanjany tsara indrindra amin'ny sofina? Ary inona no dingana tsara indrindra amin'ny sofina?
Ahoana ny fomba hanavahana ny hakitroky ny fingotra amin'ny foam amin'ny loko? ary inona ny hakitroka tsara indrindra ho an'ny sofa ary inona ny hakitroka tsara indrindra ho an'ny sofa? ny hakitroka dia mora avahana amin'ny loko. ny fitsipika dia mitovy amin'ny fanavahana ny lanjan'ny paoma amin'ny ...
Famerenana momba ny electrolux vata fampangatsiahana? Sarobidy ve ny mividy?
Fanamarihana momba ny vata fampangatsiahana electrolux? mendrika vidiana ve? Manana fivorian'ny Kaliningrad aho ... ny vata fampangatsiahana mihitsy no mandeha tsara, fa ny fitaovana plastika kosa tsy ho any amin'ny helo. Ny vata fampangatsiahana tsara indrindra ananantsika VestFrost Electrolux dia tena tsara ihany koa. ...
Iza ny ondana izay tsara kokoa - volon'ondry na holofiber? Iza amin'ireo no mahazo aina kokoa sy mateza kokoa?
Iza ny ondana izay tsara kokoa - volon'ondry na holofiber? Iza amin'ireo no mahazo aina kokoa sy mateza kokoa? Ny elastika amin'ny ondana holofiber dia mahasasa 1. Tsy afaka milaza na inona na inona momba ny volon'ondry aho. rameva ...
Mandra-pahoviana no ho maina ny kitay? Toeram-pandrika maina.
Mandra-pahoviana ny volon'ny polyurethane no maina? Efitra maina, hafanaina. miankina amin'ny habetsany, raha misokatra varavarana, varavarana, midina sns ianao, dia tsara kokoa ny manomboka amin'ny teboka, ary avy eo ...
Te-hanamboatra milina fanasan-drivotra aho ao an-dakozia
Te-hanamboatra milina fanasan-damba malalaka eto an-dakozia aho 60 cm tsy tongatonga ho azy. Milina mivaingana dia miovaova be rehefa mihodina. Na izany aza, afaka mihetsika izy ireo. Ary mikapoka mafy ny rindrina. ...
Inona ny fanaka modular?
inona ny fanaka maodely? raha tsy diso aho dia iray ihany ireo. Ny fanaka kabinetra dia fanaka rehetra misy kabinetra. Izany hoe manana gorodona, tafo, sisiny ary rindrina aoriana izy io. Fanaka maodely ...
Iza amin'ireo fatana lakozia no tsara "mortise" na "overhead", +/-
Iza amin'ireo fatana lakozia no "mortise" na "overhead" tsara kokoa, +/- Cut-in dia azo antoka fa mahafinaritra kokoa, fa raha manana lakozia ianao amin'ny atrikasa mafana tena mafana, toerana handrahoana sakafo, am-bifotsy ary indrindra ny ankizy kely mandritra ny andro ...
Ny satroka Ivanovo calico hividy sa tsia? Ao amin'ny tranonkala 1300 p. Ny kitapo fialan-tsasatra. Fandaniam-bola ve?
Ivanovskaya calico marokoroko hividy lambam-pandriana sa tsia ?. Ao amin'ny tranonkala 1300 r. kitapom-pianakaviana.Tsy fandaniam-bola ve izany? Jereo ny lamba. Toy ny gazy no ananan'izy ireo azy. TSY mendrika izany. Amin'ny asantsika ...
Inona no tokony ho haavon'ny birao ????
Inona no tokony hahavon'ny birao ???? Izany no nanamorana ny fanoratana Inona no 60 cm?! ! Fanohanana vy mahazatra ho an'ny latabatra h = 715 + latabatra fanitsiana +. Ary ho an'ny latabatra avo ...
Lazao ahy, tokony ho santimetatra tokony ho avy amin'ny gorodona mankany amin'ny ambainy?
Lazao amiko hoe firy sentimetatra no tokony ho avy amin'ny gorodona ka hatramin'ny ambainy? Tsy tiako rehefa mianiana amin'ny tany aho, mievina amin'ny lamaody. Cm 2, 3 avy amin'ny tany. Five. 10-45 eo ho eo. Halavan'ny ambainy ...
Inona ny hoditra eco? Miezaka manazava aho ao amin'ny salon iray fa tsara kokoa noho ny hoditra tsotra izany! Marina ve izany?
Inona ny atao hoe eco-leather? Miezaka manazava amiko izy ireo fa ao amin'ny salon iray dia tsara lavitra noho ny hoditra tsotra io! Marina ve izany? eco-leather dia leatherette miaina. fa izao…
Inona no zavatra mihintsy?
Inona ity zavatra mihantona amin'ny ambainy ity? Ao Pasternak: ... Andro ririnina ao anaty lavarangana ambain-damba tsy mihidy. Ahantona eo ambonin'ilay katsaka ny ambainy, ary avy eo sintonina izy ireo. Na aza misintona =))). Wikipedia-Cornice ...
Inona no halavan'ny amboarako?
Inona ny haben'ny ambain tokony horaisiko? Mora kokoa ny manjaitra ny maodelin'ny lambam-baravarana ilaina mba hanafarana: mpanafatra no tonga ao aminao, mandray refy, avy eo misafidy ny maodely tianao ianao, mandoa ny lamba sy miasa - ary miandry ...
Azo atao ve ny mamerina indray ny ampahan'ny sisin'ny fitaratra sy ny fomba hanaovana izany? antsipiriany
Azo atao ve ny mamerina mamerina ny lamosin'ny fitaratra sy ny fomba fanaovana azy? torolalana amin'ny antsipiriany Amalgam. Mba hamerenana amin'ny laoniny ny amalgam simba, ny toerana izay mila alamina dia diovina amin'ny landy manosotra kely) amin'ny taratasy ...
Inona no sofina tsara kokoa noho ny lohataona na foitra orthopedic? Izay maharitra maharitra ???? Mamaly ny fanontaniana tena ilaina aho
Iza amin'ny sofa no tsara kokoa noho ny volom-borona polyurethane amin'ny lohataona na orthopedic ???? izay maharitra kokoa ???? Navadiko ilay fanontaniana hoe Orthopedic dia tsara kokoa ary mateza kokoa Ny mpiara-mianatra amiko dia nivadika ho manana fandriana mitovy (loharano, famokarana romanianina, ireo hatramin'ny fahazaza). ...
55 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 9,705.